WHAT DO MEME FILTER: TIKTOK နှင့် INSTAGRAM တွင်မည်သို့ရှာရမည်နည်း - သတင်း
ဤသည်မှာ TikTok နှင့် Insta တစ်လျှောက်ရှိ 'သင်ဘာမှတ်မိသည်' filter ကိုမည်သို့ရရှိမည်ဖြစ်သည်
သင်အဘယ်အရာကိုလုပ်မိသည်ကလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဆန့်ကျင်သောကတ်များနှင့်ဆင်တူသောကစားနည်းဖြစ်သည်၊ သို့သော်ထိုအရာသည် ပို၍ ကောင်းပြီးအမှန်တကယ်ပင်ရယ်စရာကောင်းသောဖြစ်သည်။ ယခုသူတို့သည်သင် Instagram ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်ဘာတွေ filter လုပ်လဲဆိုတာကိုဖန်တီးလိုက်သည်။ TikTok ။
ကဒ်ဂိမ်းသည်ခဏကြာခဲ့ပြီးဂိမ်းတွင်ရုပ်ပုံနှင့်စကားလုံးကဒ်ပြားများဖြင့်ကွဲပြားသောမှတ်ဉာဏ်များကိုဖန်တီးသည်။ အလှည့်ကျတရားသူကြီးတစ် ဦး ချင်းစီသည်ဓာတ်ပုံကဒ်ပြားကိုရွေး။ အခြားသူများအားလုံးလှည့်လည်သွားကြသည်။ တရားသူကြီးထင်သူမည်သူမဆိုရယ်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ယခုမှာသင်သည်အခြေခံအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်ဗိုင်းရပ်စ်မသွင်းဘဲကိုယ့်ကိုယ်ကို meme ၏ဗဟိုဖြစ်လာနိုင်သည်။ What Do You Meme TikTok နှင့် Instagram တို့မှ filter များကိုဖန်တီးခဲ့သည်။
သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကို tinder အပေါ်နေပါဘူး
@rubyyoliviaa သူတို့ကသမင်ဒရယ် ## fyp ## xyzbca ## captionthis ♬မူရင်းအသံ - ပတ္တမြား
Instagram တွင်၊ သင်ကိုယ်တိုင်ကို meme အဖြစ်ဖန်တီးရန်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သော်လည်း TikTok တွင် filter သည် Caption This ဟုခေါ်သည်။ ထို့အပြင်လူများက၎င်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် FBI အေးဂျင့်နှင့်တူသည်ဟုသင်ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်၊
၁။ TikTok ကိုဖွင့်ပြီး Create option ကိုရွေးချယ်ပါ။
၂။ ကင်မရာဖွင့်ပြီးလျှင် Effects ကိုရွေးပါ။
၃။ New ကိုရွေးပါ။ သင်ဘာလုပ်သည်ဟုဖော်ပြထားသောအရာကိုမတွေ့မချင်းအနည်းငယ်မျှ scroll လုပ်ပါ။
၄။ TikTok ကိုကျော်ကြားရန်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်၎င်းကိုနှိပ်ပါ။
Instagram ပေါ်၌သင်ဘာလုပ်ရန် filter လုပ်မည်နည်း
၁။ Instagram ကိုဖွင့်ပြီးသင်၏ပုံပြင်များထဲသို့ထည့်ရန်နှိပ်ပါ။
၂။ Browse Effects ကိုနှိပ်ပါ။
4. What Do You Meme Creator ကိုနှိပ်ပါ။ အဲဒီမှာ filter ကိုတွေ့လိမ့်မယ်။
အကယ်၍သာ ကျွန်ုပ်၏ meme သာဗိုင်းရပ်စ်ကိုသာဝင်ရောက်နိုင်လျှင်၎င်းသည်ကြီးကျယ်လိမ့်မည်။
ဘာ Jeff အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တာလဲ
• TikTok တွင်လူတိုင်းနံပါတ် ၇ ကစားနေသူကားမည်သူနည်း။
• TikTok တွင်အော်ဟစ်သံများကလူတိုင်းအားစောင့်ဆိုင်းနေသည်၊
• Megan ပျောက်နေတာကဘာလဲ? TikTok ၏ပိတ်ပင်ထားသောထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းသောရုပ်ရှင်သည်ကျော်လွန်သွားသည်